Le nhlanzi zithandwa kakhulu. Kukhona inala ukupheka zokupheka, kodwa cod Polish ingenye izitsha elula futhi original. It is zazisebenzela iholidi noma ithebula kwansuku zonke. EPoland, efana okuphuzwayo kuvamile, kungashiwo, kuyinto isidlo kazwelonke, okuyinto itholakala zonke amathilomu nezindawo zokudlela. Ngakho, ake ukupheka.
Bilisa amaqanda, uhlanze izinhlanzi, uthathe izingxenye. Beka amanzi umlilo, ukubeka onion, izaqathe kanye izinongo. Lungiselela umhluzi, yeka ukuthi inhlanzi, uyigcine khona cishe imizuzu engu-10 phezu emlilweni ophansi. Ama-cod ase-Polish wakhonza sauce. Abilisiwe amaqanda Chop, uhlanganise ne ibhotela isigamu inkomishi izinhlanzi umhluzi kanye isiyaluyalu phehla. Ungakwazi ukwengeza imifino oqoshiwe. Lungiselela izinhlanzi on ipuleti, uthele usoso phezulu, njengendlela dish side, ungasebenzisa amazambane noma irayisi.
Indlela okumnandi ukupheka cod
Futhi ukusika izinhlanzi emafutheni esishisayo Fry nhlangothi zombili. Ikhasi anyanisi bese isanqante, isigamu sikadali izithako utamatisi unamathisele nge izinongo, nquma lonke futhi ushiye eluhlaza. Bilisa amazambane kuze kuthambe. Gcoba uhlobo ibhotela, wafaka izingqimba izinhlanzi, imifino fresh, nezilimo eziyizigaxa futhi uthele zonke imifino steamed. Beka kuhhavini imizuzu 40-50. Lapho sikhonza fafaza nazo zonke izimila.
Ungadliwa izithombe eseqedile izinhlanzi imibukiso, bheka mnandi kakhulu ngaso sonke isikhathi. Ngezikhathi ezinjalo, ngifuna ukuya futhi apheke okuthile okungavamile futhi okumnandi. Ngokwesibonelo, okuthosiwe ulwandle cod. Ukuze wenze lokhu, kudingeka usike inhlanzi, ukwehlukanisa fillet bese uthathe kube izingxenye ezingaba. Hlikihla nge izinongo bese Roll ufulawa. Fry izinhlanzi on epanini esishisayo nhlangothi zonke. Beka ithawula iphepha ingilazi amafutha ngokweqile. Njengoba dish side amazambane efanelekayo noma irayisi abilisiwe.
Burgers okumnandi inhlanzi
Cod nezibopho ukusonta ku-grinder inyama, ukuthumela kunye isinkwa ofakwe ubisi anyanisi ethosiwe. Esikhathini yenkomo engeza amaqanda eluhlaza, lamakha, isiyaluyalu. izandla Wet ukwakha amabhola, cabaza kancane bese Roll e breadcrumbs (futhi ungakwazi ukwengeza seasonings kubo). Ethosiwe emafutheni zemifino kuze segolide. Singasho ephekwe eziko, uma uthanda. Yiqiniso, Burgers - akusiwona cod-Polish, kodwa isidlo namanje emangalisayo futhi ephelele yokusanhlamvu nemifino salads.
meatballs Yenza ukugxusha njengoba kule iresiphi odlule, engeza imifino kanye semolina. Ingxube lahlukaniswa laba yizicucu amancane ifomu amabhola, Roll nabo ufulawa. Songa epanini bese uthele ingilazi izinhlanzi isitokwe. Ubilise kwabanye imizuzu 20 on ukushisa low. Phaka no ayisikhilimu omuncu noma isoso.
Ama-cod ase-Polish - isidlo esihlwabusayo kakhulu futhi zemikhosi. Nokho, ngenxa yokuthi le nhlanzi kungenziwa kuphekwe okuningi awukudla yasekuqaleni futhi okumnandi ukuthi uyobheka enkulu etafuleni wentokozo kanye kwansuku zonke. Noma yimuphi wekhaya angapheka izitsha, zokupheka ezichazwe kulesi sihloko. Izivakashi nezilwane ngeke umangale.